काेराेनाकाे कहर , लकडाउन र टाेल बिकास संस्थाकाे भुमिका - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०२, २०७७ समय: ७:५०:१४
कोरोना भाइरस ( कोविड १९ ) को महामारीले बिश्व अक्रान्त छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । अझ प्रदेश एकमा भाइरसबाटै संक्रमित हुनेहरूको संख्या दैनिक बढन थालेको छ । समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलन थालेपछि प्रदेश सरकार र मातहतका स्थानीय निकायहरूले आ आफ्नो शहरलाइ लक डाउन घोषणा गरेका छन भने केहि जिल्लाहरूमा प्रसाशनले निषेधज्ञा जारी गरेको अवस्था छ ।
हुन त लक डाउन र निषेधज्ञा नै कोरोनाको औषधी भने हइन । सामाजिक स्तरमा जनचेतना कमि हुदा र सावधानी अपनाउनुको सट्टा हेलचेक्राइ गर्दा यो स्थिती आइपुगेको भन्न सकिन्छ । यद्यपी प्रदेश एकमा निषेधज्ञा र लक डाउन गरिरहदा ठुलो मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन यो सकरात्मक पक्ष हो तर सधै यहि अवस्था रहि रहे बिविध संकटहरू देखा पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको छ ।
प्रदेश एककै कुरा गर्दा अन्य शहरहरूको तुलनामा बेग्लै पहिचान बनाएको सुनसरीको इटहरीमा भने लकडाउनकै समयमा पनि हेलचेक्राइ बढदो छ । बित्तिय संस्था देखि बैंकहरू खुल्ला छन । मानिसहरूको भिड पनि त्यतिकै छ । बाहिर देखावटि पसलहरू बन्द गरिएपनि भित्र भित्रै कारोबार गरेर कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू यहि समय मालमाल बनिरहेका छन । सानाहरूले व्यवसाय बन्द गरेपनि ठुलाहरूले पुरानै पारा देखाएपछि बजारमा चर्को बिरोध चलिरहेको छ ।
इटहरीको मुख्य राजमार्गमा प्रहरी प्रसाशन छ उसले जाने सम्म र नीति नियम संगत काम कार्वाहि गर्दछ । त्यसमा कुनै दुइमत भएन तर भित्री गाउमा प्रहरी पुग्न सक्दैन । पुगिहाले पनि प्रहरीलाइ देखेर केहि समय लकडाउन पालना गरे जस्तो गरिन्छ त्यसपछि पारा उहि हो सबैले देखेकै कुरा हो । अब यो अवस्थामा निस्कृिय रहेका टोल बिकास संस्थाहरू जाग्नु पर्छ । यो कुनै राजनीतिक पार्टी वा शक्ति संगठनले आवहान गरेको नेपाल बन्द र हडताल होइन जहा जस्को पनि मनपरी चलिरहोस !
यो बिश्वभर महामारीबाट अक्रान्त बनिरहेको कोरोना भाइरसको कहर हो । सानो गल्तीले भोली गाउ समाज समसान बनिन सक्छ ।अहिले अवस्था सामान्य छ तर यहि पाराले हेलचेक्राइ गर्दै जाने हो भने भोलीका दिन समाज समसानमा परिणत हुन सक्छ । उदहारणमा हेर्ने भने नजिकैको छिमेकि देश भारतलाइ हेरौ ।
सुरूवाती समयमा कोरोना भाइरसबाट ५ जना नागरीकले ज्यान गुमाउदा गरिएको हेलचेक्राइको परिणाम अहिले भारतले भोग्दै आएको छ । भारतमा मात्रै अहिले सम्म भाइरसकै कारण ५० हजारको हाराहारीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन भने त्यहा संक्रमितहरूको संख्या २५ लाख ८९ हजार ६८२ रहेको छ यो बिवरण अझै बढन सक्ने त्यहाका सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूले पनि बताउदै आएका छन ।
यहि अवस्थाबाट अहिले नेपाल पनि गुज्रिरहेको छ । आजको मिति सम्अम आइपुग्झदा नेपालमा पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या १०७ पुगिसकेको छ भने संक्रमित हुनेहरूको संख्या २७ हजार नाघिसकेको छ । यो बिवरण अझै बढने देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश एकमा पनि हाल सम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या १४ जना पुगिसकेको छ भने संक्रमितहरूको संख्या २ हजार नाघिसकेको छ र यो बिवरण पनि क्रमश बढदै गएको देखिएको छ । यता प्रदेश एकको उदयीमान शहर इटहरी कोरोनाको उच्च जोखिम छ भनेर पटक पटक समाचार बजाइरहदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नै नराखेको परिणाम अहिले भोग्न बाध्य छ । एक जना संक्रमित देखिदा इटहरी पुरै सुनसान देखिन्थ्यो तर अहिले संक्रमितहरूको संख्या ४९ पुग्दा इटहरी नामै मात्रको लक डाउन छ त्यसमा पनि कालोबजारी गर्ने ब्यापारीहरूलाइ मालामाल भने झै ब्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
मुख्य शहरहरूलाइ प्रहरी प्रसाशनले कन्ट्रोलमा राखेपनि भित्रि गाउहरू भने त्यतिकै छोडिएको प्रस्ट देखिन्छ ।यस्तो बेलामा अब निस्कृय र सकृिय रहेका दुवै टोल बिकास समितिहरूलाइ जगाउने बेला आएको छ । आफ्नो गाउलाइ महामारीबाट जोगाउन टोल बिकास समितिका पदाधिकारीहरू लागिपर्नु पर्ने आवस्यक देखिएको छ । स्थानीय सरकार संग सहकार्य गरी टोलबिकास समितिका पदाधिकारीहरू आफ्नो गाउलाइ महामारीबाट बचाउन अहम भुमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ ।
इटहरीमा करीब ४ शयको हाराहारीमा टोल बिकास संस्थाहरू रहेका छन तर उपमहानगरको शुचिमा भने २४६ भन्दा बढी दर्ता भएका छन । ति मध्ये पनि केहि टोल बिकास समिति समाजकै नमुना बनिसकेका छन । धेरै जसो निस्कृिय नै छन ।
सबै स्थानमा जनप्रतिनिधि पुग्दैनन त्यो अवस्थामा गाउकै टोल बिकास समितिसंग पनि प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफ्नो टोलमा को नयाँ मान्छे आएको छ त्यसको बिवरण राख्ने , लकडाउनको बेला स्थानियहरूलाइ अति आवस्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन सल्लाह सुझाव दिने , लकडाउनकै बेला आवस्यकिय राहत बितरण गर्ने सम्म टोल बिकास समितिको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।
यो भन्दा पनि आफ्नो गाउमा भएको बिकास देखि काम कार्वाहिहरूको प्रत्यक्ष निगरानी र खबरदारी प्रति टोल बिकास संस्थाको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ तर कोरोना भाइरसको माहामारी संगै अहिले टोल बिकास संस्था पनि निस्कृिय जस्तै देखिएको छ । कोरोना संक्रमणले बिरामि हुनु खासै ठुलो समस्या मानिदैन तर हेलचेक्रयाइ गरियो भने ज्यान भने पक्कै जान्छ । यहाँ सम्म त ठिकै छ तर आफन्तले अनुहार समेत देख्न नपाइ शवलाइ व्यवस्थापन गरिन्छ त्यो भन्दा नराम्रो क्षण अरू के होला तपाइ हामि कल्पना गरौ त ! कहि कतै संक्रमणकै कारण ज्यान गएमा त्यो भन्दा दुखद क्षण केहि हुदैन , समाजमा रहेर वर्षौदेखि कमाएको मान प्रतिष्ठा के काम जब मलामि एक जना पनि हुदैनन ।
तसर्थ शहरमा रहेका जति पनि टोल बिकास समितिहरू छन ति सबै अब जाग्नुपर्छ र गाउमा हुने प्रत्येक कृियाकलापको प्रत्यक्ष निगरानी राख्नुपर्छ । आफ्नो गाउलाइ महामारीकाे संकटबाट जाेगाउनु छ भने निस्कृिय रहेका टोल बिकास संस्थाहरू अब साच्चै जाग्नुपर्छ । पछि शव उठाउनु भन्दा अहिले लौरो उठाएकै राम्रो भने जस्तै सबैमा लकडाउनकाे पालना गराउन संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भुमिका खेल्नुपर्ने देखिएकाे छ । ।जस्ले लकडाउनको अवज्ञा गर्छ तिनिहरूलाइ सम्झाउने बुझाउने अधिकार टोल बिकास समितिको पनि हुन्छ यदि नमानेको खण्डमा प्रहरीमा जिम्मा दिने सम्मको अधिकारलाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अन्तमा नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरस ( कोबिड १९ ) इटहरीमा पनि समुदाय स्तरमा पुगिसकेकोले आवस्यकिय सुरक्षा सतर्कता अपनाऔ त्रासित नबनौ घरमा बसौ बाहिर निस्कदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौ । र सामाजिक दुरी कायम गरी आफु पनि संक्रमण हुनबाट बचौ र अरूलाइ पनि बचाऔ । शरिरलाइ ताकत दिने प्रकारमा खानेकुरामा ध्यान दिऔँ ।